Wear OS dia tsy hitantana ny Gear S4 | Samsung manaraka Androidsis
Tamin'ny 25 Mey, navoakanay ny sioka navoakan'i Evan Blass izay nilazany fa ny orinasa Koreana dia miasa amin'ny taranaka manaraka amin'ny Gear S4, terminal izay io dia hotantanan'ny Wear OS fa tsy Tizen, ny rafitra miasa mahafinaritra noforonin'i Samsung ary izy no mitantana ny akanjo entin'ny orinasa Koreana rehetra.
Fa parece que fikorontanana ny zava-drehetra, fisafotofotoana izay tena naharitra fotoana fohy vao fantatra fa tsy nanao izany ampahibemaso. Ary lazaiko fa nila fotoana fohy izany satria novonoiny haingana ilay bitsika izay nilazany fa ny Gear S4 dia hotantanan'i Samsung, nefa tsy manome fanazavana fanampiny. 12 andro taty aoriana dia nandefa bitsika mandà izany vaovao izany izy.
Araka ny hitantsika tao amin'ny bitsika navoakany, ny fahitana fahitana hitany teo am-pelatanan'ny mpiasa sasany tao amin'ny biraon'ny Samsung, tsy mpiasan'ny Samsung izy ireo, fa avy amin'ny Google, noho izany dia tsy azon'ny Tizen tantananina na oviana na oviana izy ireo, fa amin'ny Wear OS.
Ny fomba tokana handresena lahatra na hanaovana fifanarahana amin'i Samsung mba hisedra loza amin'ny Wear OS amin'ny smartwatch voalohany dia ny an'ny orinasa Mountain View. apetraho ambony latabatra ny vola be fa afaka manonitra ny Samsung miatrika risika amin'ity fomba ity, satria izy no mpivarotra smartwatches faharoa lehibe indrindra eny an-tsena.
Raha tena te hamerina amin'ny laoniny ny Wear OS eo amin'ny tsenan'ny smartwatch i Google. ny vahaolana dia ny tsy hiaraha-miasa amin'ny LG na handefa ny fitaovany manokanaFa kosa, ny tsara indrindra dia ny miankina amin'ny orinasa lehibe toa an'i Samsung, orinasa iray manana fizarana manerantany ary mandany vola be amin'ny fanaovana dokam-barotra, izay hahafahantsika mampahafantatra ireo asa sy fahaiza-manao atolotry ny rafitra fiasan'i Google ho an'ny akanjo azo entina.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » SmartWatch » Wear OS dia tsy hitantana ny Gear S4 an'ny Samsung manaraka